Igbo, John: Lesson 049 - Echiche di iche iche banyere Jisos n'etiti ndi mmadu na ndi isi ochichi (Jọn 7:14-53) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 049 (Disparate views on Jesus)
14 Ma mb͕e ọ di n'etiti ememe ahu, Jisus rigoro n'ulo uku Chineke, nēzí ihe. 15 Ya mere ọ juru ndi-Ju anya, si, Gini mere nwoke a ji mara akwukwọ, ma ọ buru na agughi akwukwọ? 16 Ya mere Jisus zara ha, si, Ọ bughi nkem ka m'zí ihe, kama ọ bu Onye ziterem. 17 Ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ ime uche ya, ọ ga-ama banyere ozizi ahụ, ma ò si n'aka Chineke, ma ọ bụkwanụ ma ọ bụrụ na mụ onwe m na-ekwu okwu n'onwe m. 18.Onye nēkwu onwe-ya nāchọ otuto nke aka ya: ma onye nāchọ otuto nke onye zitere ya bu onye ezi-okwu, ọ dighi kwa ajọ omume di nime ya.
Jizọs atụghị egwu ọnwụ ma ọ bụ imerụ ndị iro ya. Ọ gara n'ihu n'ụzọ kwekọrọ n'uche Nna ya na Jeruselem na nzuzo n'oge ememme ahụ. N'ebe ahụ, ọ zobeghị onwe ya, kama ọ gara n'ụlọikpe ụlọ nsọ, na-ezi Oziọma ya n'atụghị egwu dịka onye nkụzi a kwadoro. Ndị mmadụ chere na Chineke na-agwa ha okwu. Ya mere, ha jụọ onwe ha, sị: Olee ebe nwa okorobịa a nwere echiche dị omimi banyere nkà mmụta okpukpe? Ọ zụlịghị n'okpuru ọkà mmụta a ma ama nke Akwụkwọ Nsọ. Kedu ka onye ọkwa nkà na-enweghị ọzụzụ agụmakwụkwọ mara anyị na eziokwu zuru oke nke Chineke?
Jizos zara dika agasi, "Eziokwu, ana m ezi ihe ma buru onye nkuzi nke eziokwu karia na m bu Okwu Chineke n'ezie, ihe obula na ochicho nke Chineke di nime m: ozizi m abughi nke m, abum Chineke O bikwa n'ime m, Nna m ga-akụrụ m ihe, m maara oke nke echiche ya, atụmatụ ya, nzube ya na ikike ya. Ọ bụghị ihe m chere n'onwe m, n'ihi na echiche Chineke bụ eziokwu. o doro anya."
Ya mere, o nyere Nna ya otuto ma rubere Ya isi; akpọ onwe ya Onyeozi Chineke. O nyeghi onwe ya n'onwe ya, ma o bia n'aha nke Nna ya nke juputara ikike nke Chineke. Ya mere Jisos bu nwa Chineke na onye ozi n'otu oge ahu, ayi kwesiri uche ayi, okwukwe ayi na ofufe ayi nye Nna.
Iji mee ka okwukwe ndị Juu kwenye onwe ya, o gosipụtara ha ụzọ dị irè iji mesie ha obi ike na ozizi ya kwekọrọ n'uche Chineke. Ya mere, olee ihe akaebe doro anya maka ezi ozizi Jizọs na onye ọ bụ? O kwuru, sị, "Gbalịsie ike ime ihe dịka Oziọma m si dị, ị ga-achọpụta ịdị ukwuu ya." Tinye okwu amaokwu nke Kraist n'amaokwu, ị ga-ahụkwa na okwu ya abụghị mmadụ kama ọ bụ Chineke."
Mgbalị itinye ozizi Kraịst n'ọrụ chọrọ mbụ gị mkpebi. Ị chọrọ ihe ọ chọrọ? Enweghi ihe kwekorita uche gi na Chineke gi agagh amata ezi ihe omuma banyere Onyenwe ayi. Ebe uche gị na-enye ya, nke ahụ bụ nke Kraist, ị ga-ebido ibuli ọkwa dị elu na nke ọhụrụ - ị ga-amata Chineke dị ka Ọ dị.
Onye ọ bula nke na-azụ onwe ya ime uche nke Nna, dịka Jizọs kụziiri anyị, ga-enweta oke mmiri dị n'etiti Oziọma na Iwu. Onyenwe anyi etinyeghi ubu di arọ n'ubu anyi, mana n'otu oge ahu naenye anyi ike choro iburu ya. Ị ga-enwe ike iji ọṅụ mee uche ya. Onye obula nke nerube isi n'iwu nke Kraist, nata ike iji me ka ihu ya no. Ozizi ya emeghị ka ọ daa, dịka ọ dị n'iwu Moses, kama ibi ndụ n'ozuzu nke amara Chineke. Onye ọ bụla nke chọrọ ime uche Chineke kpughere na ozizi Kraịst na-ejikọta onwe ya na Chineke na ịmara na Kraist abughi otu n'ime ndị nkụzi mmadụ, mana Okwu Chineke gụnyere. Obi ighi abia náenweghi ihe banyere ihe omimi, kama site na mgbaghara mmehie wee nye kwa anyi ike nke nd nke Chineke.
19 Ọ bughi Moses nyere unu iwu, ma ọ dighi onye ọ bula nime unu nēme iwu ahu? Gini mere i nāchọ uzọ ib͕um? 20 Ìgwè madu ahu zara, si, I nwere mọ ọjọ. Ònye na-achọ igbu gị?"
Àgwà Kraịst n'ịdị nsọ nke aha ya bụ ịsị ndị Juu, "Ị natara iwu ahụ, ma ọ dịghị onye ji ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị!" Nkwupụta a dakwasịrị obi nke mba ndị Juu na-emesi ike na ọ dịghị otu n'ime ndị Agba Agba Ochie emezuzuru ihe ndị Iwu chọrọ. Onye ọ bula nke mehiere otù iwu ka ọ bu, ikpé nile nke Chineke di kwa n'aru ya. Site na nkwupụta a, Jisos mere ka ndị Juu kwupụta na ha bụ ndị ezi omume, ha gosipụtara na ịnụ ọkụ n'obi na mgbalị nke ndị dere iwu bụ aghụghọ onwe onye.
Ọ gwara ha na ọ maara na ndị ndu ha chọrọ ibibi ya. Ọ dịghị ihe ọ bụla zoro n'ihu Jizọs. Ọ dọrọ ndị na-ege ya ntị aka ná ntị megide ịnụ ọkụ n'obi ọ bụla ma mesie ya ike na ị ga-eso ya.
N'otu aka ahụ, ọ jụrụ, sị, "Gịnị kpatara ị chọrọ igbu m?"
Okpukpu ndi mmadu wezugara okwu ndi Kraist, o juru ha anya n'ihi na o kwuru na odigh onye obula n'ime ndi ezi omume. Nzaghachi ha bụ ihe nzuzo maka nkata ha, "Ee e, ee, onye chọrọ igbu gị? Ọbụna ụfọdụ gwakwara na mmụọ ọjọọ dakwasịrị ya. Ha kpuru ìsì n'ime ịkpọasị ha, ha enweghịkwa ike ịmata ọdịiche dị na Mmụọ Nsọ site na mmụọ ọjọọ. Ha enwekwaghị mmetụta maka mmata nke ịhụnanya Chineke.
Olee ihe akaebe na-egosi na ozioma sitere na Chineke?